यो साता ‘अन्नपूर्ण सम्पूर्ण’ले २५ वर्ष कटेका एक सयभन्दा बढी युवायुवतीसँग विवाहको विषयमा एउटा सर्वेक्षण गरेको छ। कुराकानीका क्रममा अधिकांशले बिहेलाई ‘बर्बादी’को संज्ञा दिएका छन्। उमेर पुगेका युवायुवतीमा बिहेप्रतिको वितृष्णालाई यसपालिको ‘सम्पूर्ण’मा समेटिएको छ।
काठमाडौँ, डिल्लीबजारकी सिसम पोखरेल (२८) ले पनि अहिले नै बिहेका लागि हतार नभएको बताइन्। ‘अहिले नै बिहेको के हतार ?’ उनले भनिन्, ‘जबसम्म आफ्नो करिअर बलियो बनाउँदिनँ, तबसम्म बिहेबारे सोच्दा पनि सोच्दिनँ।’ साथीहरूको बिहे भएको देखेर उनलाई कहिलेकाहीँ बिहे गरौँ कि भन्ने पनि लाग्छ। ‘तर, पछि उनीहरूले दुःख पाएको र बन्धनमा परेको देख्दा सिंगल लाइफ नै ठीक भन्ने लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘बिहे भनेको अरूको देखेर, करकापमा परेर होइन, आफू सक्षम भएपछि पो गर्नुपर्छ।’
काठमाडौँ, सोह्रखुट्टेका ३३ वर्षीय दीपक बोहोराको पनि बिहे नगर्ने सोच छ। ‘२० वर्षको उमेरसम्म गेम खेलेर बित्यो,’ उनले भने, ‘२५ वर्षसम्म पढाइले पेल्यो। २५ देखि ३३ वर्षको उमेर जागिर खाँदैमा बित्यो। अझै जिन्दगीमा कति कुरा गर्नुछ। बिहे गरेर के काम ?’
समाजशास्त्री डा. मीना उप्रेती जमाना फेरिएको बताउँछिन्। ‘हजुरआमाको पालामा ११/१२ वर्षमा बिहे हुन्थ्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘आमाको पालामा बिहे गर्ने उमेर १५/१६ वर्ष पुग्यो। अहिले २० देखि ३० वर्षको उमेर बिहेका लागि योग्य मानिन्छ। अबका पुस्ता ‘एज इज जस्ट अ नम्बर’ (उमेर भनेको अंक मात्रै हो) भन्छन्, र आफूलाई मन लागेको बेला बिहे गर्छन्।’ पहिला ‘ज्वाइँले पढाइदिन्छन्’ भन्ने आमाबाबुहरू अहिले छोरीलाई आफैँ पढाउन थालेको उनी बताउँछिन्। ‘हजुरआमाले देउता मान्ने श्रीमानलाई आमाले देउता मान्न छाडिसक्नुभयो,’ उनी भन्छिन्, ‘बिहेपछि अधिकांश महिलाको जीवन श्रीमान्, सासूससुरा र छोराछोरीको वरिपरि घुमेर बित्छ। बिहे गरेपछि जागिर छोडेका महिला थुप्रै भेटिन्छन्।’ विवाहपछि एउटी महिलाले आयआर्जनसँगै आत्मनिर्णय पनि गुमाउने उनी बताउँछिन्। ‘छिटो गरिएका विवाहले अधिकांश महिलाको करिअर बर्बाद गरिदिएको छ,’ उनी भन्छिन्।
काठमाडौँ, सामाखुशीका ३२ वर्षीय अनिल मल्लले ३० वर्ष कटेपछि बिहे गर्ने सोच बनाएका थिए। ‘योभन्दा अगाडि जागिर पनि थिएन, कमाइ पनि थिएन,’ उनले भने, ‘तर, राम्रा–राम्रा केटीको प्रस्ताव आएको थियो। अहिले कमाइ पनि छ, सरकारी जागिर पनि छ। तर, आफूलाई चित्तबुझ्ने केटी भेटिँदैन। दुई वर्ष भइसक्यो केटी खोजेको। आफूले रोजेजस्तो कतै भेटिएन।’
२६ वर्षीया आइसा क्षत्रीले बिहेबारे आजसम्म सोचेकी छैनन्। ‘म एक्ली छोरी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘मलाई बिहेको केही चिन्ता छैन। म जन्मेको घर नै मेरो घर हो। मलाई अरूको घर आफ्नो बनाउनु छैन।’ उमेर ढल्केपछि आफूले रोजेजस्तो केटा नपाइएला भन्नेमा आफूलाई कुनै चिन्ता नभएको उनले बताइन्। ‘मलाई भविष्यभन्दा वर्तमान महŒवपूर्ण लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले स्वतन्त्र भएर बाँचिरहेको छु। केहि समय बिन्दास लाइफ जिउने हो। आफ्नो खुट्टामा उभिने हो। बिहे गर्नैपरे त्यसपछि गरौँला।
जबसम्म पुरुषको सोच परिवर्तन हुँदैन, समाजको संरचना र संस्कृतिमा परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म बिहेप्रति वितृष्णाको तह बढ्दै जाने समाजशास्त्री डा. उप्रेती बताउँछिन्। ‘महिलाहरू सजिलै बिहे गर्ने पक्षमा छैनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘बिहेबाट महिलाले अलिकति मात्रै खुट्टा झिकिदिने हो भने यो बिहे भन्ने प्रथाको नै अन्त्य हुन्छ।’ पहिलाका महिलाले सबै कुरा सहेर बसेको हुनाले विवाह बचेको उनको भनाइ छ। ‘अब महिलाको इच्छाअनुसार समाज नचल्ने हो भने, समाजको संस्कार र पुरुषको सोच नबदलिने हो भने विवाहमै संकटमा पर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘विवाह संकटमा पर्नेबित्तिकै परिवार र समाजमा संकट पर्छ।’
(युवराज भट्टराई, अस्मिता खड्का, आशक्ति फुयाल, मेनुका कोइराला, उर्मिला स्याङ्तान र सुमित सुवेदीको सहयोगमा )
‘बिहे न छिटो ठीक न ढिलो ठीक’
आजका युवा वैवाहिकभन्दा एक्लो जीवनमा रमाउन थालेका छन्। बिहे गर्नुभन्दा एक्लै जीवन कटाउनु मज्जा भनेर बिहेदेखि तर्किने युवा नेपाली समाजमा प्रशस्तै भेटिन्छन्। विवाहपछिको विवाद, झन्झट, असहजता, तनाव, छटपटी र अप्ठ्यारोपनमा होमिनुभन्दा एक्लो जीवन बिताउनु ठीक भन्ने धेरैको तर्क छ।
एक्लो जीवनको एउटा पाटो आनन्द छ। साथीसंगी बनायो, अफेयरमा बस्यो, रमाइलो गर्‍यो, काम र करिअरलाई अगाडि बढायो। तर, यसको अर्को पाटो नरमाइलो पनि छ। ढिलो बिहे गर्दा पार्टनरसँग एड्जस्ट हुन गाह्रो पर्छ। बच्चाहरू ढिला जन्मिन्छन्। ढिलो जन्मिएको बच्चा र आमाबाबुबीच जेनरेसन ग्याप हुन्छ। यसले गर्दा बच्चाहरूलाई बुझ्न धेरै गाह्रो हुन्छ। २५/३० वर्षको उमेरमा बच्चा जन्माएका आमाबुबाको बच्चासँग राम्रो ट्युनिङ हुन्छ। तर, ३५/४० को उमेरमा बच्चा जन्माउँदा बच्चासँग राम्रो ट्युनिङ नहुन सक्छ। ढिला बिहे गरेका दम्पतीले छोराछोरी हुर्काउन जान्दैनन्।
महिलाको हकमा ढिला बिहे गर्दा डिभोर्स भइसकेको, उमेरले नेटो काटेको पुरुष पर्न सक्छन्। पुरुषले पनि आफूले सोचेको जस्तो श्रीमती पाउँदैन। ३५/४० वर्षको केटाले २०/२५ वर्षको केटी त पाउला, तर त्यहाँ जेनेरेसन ग्याप हुन्छ। एकअर्काबीच शंका–उपशंका उत्पन्न हुन थाल्छ। बाहिर अफेयर हुन थाल्छ। श्रीमती राम्री भएको, बाहिर निस्केको, कसैसँग बोलेको श्रीमान्लाई चित्त बुझ्दैन। उमेर नमिल्नेसँग बिहे गर्नु भनेको समझदारीमा समस्या आउनु पनि हो। त्यसैले न त छिटो, न त ढिलो, ठिक्क उमेरमा बिहे गर्नुपर्छ।
कमजोर विवाह संस्थाको बढ्दो महत्त्व
ढिला बिहे गर्दा जिन्दगी बुझ्न सजिलो हुन्छ। मानिस स्वतन्त्र र सिर्जनशील हुन्छ। कुनै निर्णय लिनका लागि मानिस परिपक्व भइसकेको हुन्छ। तर, ढिलो बिहे गर्नेले पनि आफ्ना आधारभूत आवश्यकता भने पूरा गर्नुपर्छ। ३०/३५ वर्षसम्म बिहे पनि नगरेका र प्रेम तथा रोमान्टिक सम्बन्धमा पनि नरहेका धेरै मानिस डिप्रेसनमा गएका उदाहरण छन्। उनीहरू यौनका हिसाबले तड्पिएका छन्। त्यसैले यौनका हिसाबले पनि समयमै बिहे गरेको राम्रो।
श्रीमान् वा श्रीमती कस्तो पर्ला वा पर्ली ? विवाहपछि के होला ? आमाबाबुसँग कसरी पहिलाजस्तै सुमधुर सम्बन्ध राखिरहने ? भनेर धेरै जना डराउने गर्छन्। यस्ता कुरासँग जुध्ने उपाय थाहा नहुँदा धेरैको जीवन संकटमा पर्छ। समझदारीमा समस्या भएर मात्रै बिहे टुट्दैन। प्रायः बिहे सम्बन्ध निर्वाह गर्ने उपाय थाहा नभएर टुट्छन्। एकअर्कालाई बुझ्ने ढंग नहुँदा डिभोर्स हुन्छ।
बिहेपछि समझदारीमा समस्या आयो भने एकअर्कालाई बुझ्ने कोसिस गनुपर्छ। कसैले आफूलाई बुझ्दैन भने लाग्छ भने नबुझेको कुरा बुझाउने कोसिस गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ आफ्नो पनि गल्ती केलाउनुपर्छ। सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा, मानिसको दृष्टिकोण, बुझाइ, ढंग र चेतना हो। कसैलाई बुझाउन सकिएन भने गुनासो गर्ने, आत्तिने होइन। बुझाउन कोसिस गर्नुपर्छ। अलिअलि आफू उसको अनुसार बनिदिने, अलिकति उसलाई आफूअनुसार बनाउने। अलिकति ऊतिर ढल्किने, अलिकति आफूतिर ढल्काउने। अनि, पो जिन्दगी जिन्दगीजस्तो हुन्छ !
‘बिहे दोस्रो प्राथमिकता बन्दै छ’
हिजोको समाजमा विवाहले महिलालाई सुरक्षित बनाउँथ्यो। महिलाको बाँच्ने आधार नै बिहे थियो। बिहेपछिको घर नै उसको आफ्नो घर हुन्थ्यो। हिजो हजुरआमा/हजुरबुबाले ‘मेरो मर्ने बेला भयो, मलाई नातिनीबुहारी/नातिनीज्वाइँ हेरेर मर्ने इच्छा छ’ भनेको भरमा बिहे हुन्थ्यो। पहिला विवाहलाई धर्म, संस्कार, स्वर्ग इत्यादिसँग जोडेर हेरिन्थ्यो।
अहिलेका महिला आफ्नो स्वतन्त्रता, इच्छा र क्षमतामा सचेत हुन थालेका छन्। विवाहसम्बन्धी पुराना धरातल खुकुलिँदै गएका छन्। महिलाहरू विवाहले आफूलाई फाइदा/बेफाइदा के पुर्‍याउँछ भनेर मूल्यांकन गर्ने भएका छन्। त्यसैले आफ्नो करिअर बनाउने उमेरमा उनीहरूले कुनै पनि हालतमा बिहे गर्दैनन्। पहिला आमाबाबुले इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेर छोरीहरूको बिहे गरिदिन्थे। आजभोलि छोरीहरू उल्टै आमाबाबुलाई इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेर बिहे गर्न मनाही गर्छन्।
धेरै जना अफेयर र बिहेमा फरक हुन्छ भन्छन्। वास्तवमा यी दुईबीच भिन्नता छन्। लभ वा अफेयरमा दुवै पक्षले एकअर्कालाई ख्याल राख्छन्। त्यहाँ सेयरिङ र केयरिङ हुन्छ । त्यहाँ कुनै प्रकारको हाइरार्की हुँदैन। तर, विवाह भनेको हाइरार्की हो। अफेयरमा हुँदा ‘ए काले चुप’ भनेको मान्छेलाई बिहे गरेपछि ‘आइस्यो, खाइस्यो’ भन्न समाजले बाध्य बनाउँछ। विवाहपछि सामाजिक, सांस्कृतिक र भावनात्मक रूपमा पुरुष माथि, महिला तल पर्छन्। पहिला ‘मलाई जे भनेर बोलाए पनि हुन्छ’ भन्ने ब्वाइफ्रेन्ड श्रीमान् बनिसकेपछि ‘अरू बेला मलाई तँ/तिमी जे भने पनि केही फरक पर्दैन, मान्छेको छेउमा चाहिँ तपाईं/हजुर भन है’ भन्न थाल्छ। समाजले उनीहरूको सम्बन्धलाई बिहेपछि थप औपचारिक र जटिल बनाइदिन्छ। यस्तो अवस्थामा धेरैले बिहेलाई झन्झट र बोझका रूपमा लिन थाल्छन्।
श्रीमान्हरू ‘खाना पाक्यो बूढी ?’ भन्दै हरेक दिन आनन्दले घरभित्र छिर्छन्। तर, कुनै श्रीमती ‘खाना पाक्यो बूढा ?’ भन्दै एक दिन पनि घरभित्र छिर्ने अवस्था हाम्रो समाजमा छैन। बिहेपछि यस्ता खालका असमान सम्बन्धहरू सुरु हुन्छन्। तिनै असमान सम्बन्धबाट टाढिन धेरैले बिहे गर्दैनन्। जबसम्म महिला र पुरुषले गर्ने काम र भूमिकामा पनि परिवर्तन आउँदैन, तबसम्म विवाहहरू टिक्दैनन्।
आजको युगमा महिलाहरू राम्रो सारी वा कुनै देशको पीआरको भरमा बिहे गर्दैनन्। उनीहरू बिहेभन्दा करिअर र घर–परिवार, सम्पत्ति र केटाभन्दा आफूमा बढी केन्द्रित हुन थालेका छन्। अहिलेका युवतीले विवाहलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेका छन्। जागिर खाएपछि कमाउने पैसा, त्यो पैसा खर्च गर्दाको रमाइलो र त्यहाँबाट पाइने इज्जतको महसुस उनीहरूले गर्न थालेका छन्। बिहेलाई मानिसले जीवन मान्न छाडिसके। यो सामाजिक संरचनामा आएको परिवर्तन हो। महिलाहरूमा आएको परिपक्वताको अवस्था हो। पुँजीवादले महिलालाई ल्याइदिएको स्वतन्त्रताको उदाहरण हो। पुँजीवादले महिलालाई काम गर्ने अवसर दियो। उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनायो।
महिला मात्रै होइन, आजभोलि पुरुष पनि बिहे गर्न हिचकिचाउँछन्। लामो समयसम्म बिहे नगरी बस्ने पुरुष प्रशस्त छन्। अधिकांश पुरुष सोझी, राम्री, जागिर नखाने, घरव्यवहार सम्हाल्ने महिलाको खोजीमा हुन्छन्। त्यस्ता महिला अहिले भेटिन मुश्किल छ।
मैले पनि ४० वर्षको उमेरमा बिहे गरेँ। पढाइ सकेँ, जागिर खाएँ, आमाबाबुप्रतिको दायित्व निर्वाह गरेँ। बल्ल फुर्सदिलो भएँ, एउटा साथी भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो, अनि बिहे गरेँ। त्यसले मलाई केही हानि गरेको छैन। विवाह करले होइन, मन लागेपछि गर्ने हो। बाध्यतामा गरिने विवाहमा धेरै सम्झौता गर्नुपर्छ। मैले मन लागेर बिहे गरेँ। भोलि छाड्नुपर्‍यो भने पनि मन लागेर छोड्छु। हिजोका महिला मन नलागी–नलागी बिहे गर्थे। मन नलागी–नलागी सँगै बस्थे।
‘ढिलो बिहे गर्दा महिलालाई बढी समस्या हुन्छ’
डा. भोला रिजाल, वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ
स्वास्थ्यका हिसाबले बिहे छिटो पनि गर्नु हुँदैन, ढिला पनि गर्नु हुँदैन। हाम्रो समाजमा ३० कटेपछि गरिने विवाहलाई ढिला मानिन्छ। ३० कटेपछि छोरीको बिहे नहोला भनेर आमाबाबुलाई चिन्ता पर्न थाल्छ। तर, विकसित देशहरूमा ३० वर्षमा बिहे गर्नुलाई छिटो बिहे गरेको मानिन्छ। उनीहरू ३५ पछिको बिहेलाई ढिलो भएको मान्छन्।
आफ्नो करिअरलाई ध्यानमा राखेर युवायुवती आजभोलि बिहे गर्नुभन्दा लिभिङ टुगेदर रिलेसनमा बस्न थालेका छन्। समाजमा डिभोर्स बढ्दै गएका कारण पनि आजभोलिका युवायुवती बिहेदेखि डराउँछन्।
स्वास्थ्यका हिसाबले ३० देखि ३५ वर्षको बीचमा बच्चा पाउनु शारीरिक, मानसिक र आर्थिक रूपमा खासै नराम्रो छैन। तर, २५ देखि ३० वर्षको उमेरमा बच्चा पाउँदा स्वास्थ्य र बच्चा पाउने प्रक्रियादेखि सबै कुरामा सजिलो हुन्छ। ३५ कटेपछि भने समस्या देखापर्न थाल्छ। यो उमेरमा बच्चा नहुने सम्भावना बढ्दै जान्छ। ३५ वर्ष पुगेपछि बच्चा पाउन नसक्ने भन्ने होइन। तर, पहिलो बच्चा ३० को हाराहारीमा पाउँदा उत्तम हुन्छ। यो उमेरमा बच्चा पाउन, हुर्काउन दुवै गर्न सजिलो हुन्छ। उमेर ढल्किँदै गएपछि बच्चा पाउन समस्या हुन्छ। महिनावारी बिग्रिन्छ। ४० वर्षपछि बच्चा पाउँदा बच्चा पाउन पनि अप्ठ्यारो र बच्चामा पनि केही विकरालता देखापर्न सक्छ। केही बच्चामा डाउन सिन्ड्रोमको सम्भावना हुन्छ। बच्चा असामान्य किसिमको हुन सक्छ। उमेर ढल्किँदै गएपछि हड्डी पनि छिप्पिने हुँदा नर्मल डेलिभरी गर्न गाह्रो हुन्छ। अपरेसन गरेर बच्चा निकाल्नुपर्ने हुन्छ। उमेर ढल्किँदै गएपछि बच्चा पाउन सक्ने क्षमता र शारीरिक सम्बन्ध राख्ने क्षमतामा पनि कमी भएर आउँछ।
हाई ब्लड प्रेसर, डाइबेटिज, थायोराइडजस्ता समस्या ४० कटेपछि सुरु हुन्छन्। यस्तो बेलामा बच्चा पेटमा आयो भने महिलाको स्वास्थ्यमा थुप्रै जटिलता देखापर्छन्। यसलाई हामी हाई रिस्क प्रेग्नेन्सी भन्छौँ। ३० हप्तापछि विकास हुनुपर्ने ब्लड प्रेसर गर्भवती हुनुभन्दा अगाडि नै भएपछि समस्या हुन्छ। उनीहरू जोखिम मोेलेर बच्चा जन्माउँछन्। उमेरको कारण बिहेमा सबैभन्दा बढी समस्या महिलालाई पर्छ। त्यसैले स्वास्थ्यका हिसाबले २५ देखि ३० वर्षलाई बिहे र बच्चा जन्माउनका लागि उपयुक्त उमेर मानिन्छ।